Iindaba -izicwangciso ezitsha zamandla ezisisiseko zaseJapan zokunciphisa ukukhutshwa kwekhabhoni ngokuhambelana namandla elanga kunye nenyukliya
Isicwangciso esitsha samandla esisiseko eJapan sokunciphisa ukukhutshwa kwekhabhoni ngokuhambelana namandla elanga kunye nenyukliya
Malunga nokuyilwa kukarhulumente waseJapan amandla amatshaUmxube (ulwakhiwo lokuveliswa kwamandla) ngowama-2030, ungene kwinqanaba lokulungelelanisa lokugqibela. Kuqikelelwa ukuba umyinge wamandla ahlaziyekayo ngo-2030 uza kunyuka ngama-10 eepesenti ukuya kuma-36% ukuya kuma-38%, kwaye amandla enyukliya aza kugcinwa. Okwangoku ngama-20% ukuya kuma-22%. U-Nihon Keizai Shimbun uxele ukuba urhulumente wase-Japan unethemba lokuba ngokulungisa kwakhona umxube wakhe wamandla, imithombo yamandla e-zero-emission iya kwenza i-60% yetotali iyonke, kuncitshiswe ukukhutshwa kwegesi eluhlaza ngexesha lokuveliswa kwamandla.
ICandelo loMphathiswa wezoQoqosho, uRhwebo noShishino eJapan liceba ukucebisa esi “siCwangciso seSiseko sezaMandla” kunye nokuxutywa kwamandla kwiKomitana yoMgaqo-nkqubo eSisiseko yoPhando oluBanzi lwezixhobo kunye naMandla (iArhente yokubonisana yoMphathiswa wezoQoqosho, uRhwebo noShishino) ngoJulayi 21 uyilo. NgokwesiCwangciso seMandla esisiSeko ngoku, iithagethi zamandla ombane zaseJapan ezingama-2030 ngama-22% ukuya kuma-24% kumandla ahlaziyekayo, ama-20% ukuya kuma-22% kumandla enyukliya, kunye nama-56% okuvelisa umbane oshushu.
Uyilo "lweSicwangciso esiSisiseko sezaMandla" esiza kuphakanyiswa ngeli xesha lityhila injongo entsha. Ukongeza ekwandiseni amandla ahlaziyekayo kunye nokugcina inani lamandla enyukliya, umda wokuveliswa kwamandla eshushu uya kuncitshiswa ube yi-41%. Ngokukodwa, ukulungiselela ukufezekisa injongo entsha, inani elikhulu lamandla elanga liya kwaziswa. Icandelo loMphathiswa wezoQoqosho, uRhwebo noShishino kutshanje bacebise ukuba iindleko zokuveliswa kwamandla elanga ngo-2030 ziya kuba sezantsi kunalezo zamandla enyukliya, zisenza ukuba ibe yeyona ndlela inexabiso eliphantsi yokuvelisa umbane okokuqala. Nangona kunjalo, kuya kusiba nzima ngakumbi ukufumana umhlaba othe tyaba aphoiiphaneli zelanga zifakiwe, okwenza kube nzima ukufikelela.
Ngokumalunga namandla enyukliya, nangona urhulumente wase-Japan enethemba lokugcina isabelo esikhoyo ngoku sokuphehlwa kwamandla ngo-2030, umbono kukuba zonke iiyunithi zamandla enyukliya ezingama-27 eziye zafakwa ziinkampani zamandla zokwenza umsebenzi ngokutsha zinokusebenza, ngelixa zili-10 kuphela ezisebenzayo ngoku. IsiCwangciso esitsha soMbane "asisibhalisi isidingo sokwakha okanye sokuhlaziya izixhobo zamandla enyukliya. Kuyakhathaza ukuba ukuveliswa kwamandla enyukliya kuya kuncipha kwixa elizayo. IJapan kufuneka ifezekise injongo yokufumana "ikhabhoni engathathi hlangothi" ngo-2050, kwaye amathemba ahlala engacacanga.